ဘာကြောင့် ကျရှုံးရတာလဲ ??? – Gentleman Magazine
ဘာကြောင့် ကျရှုံးရတာလဲ ???
25/06/2017 26/06/2017 escapetravelmagazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ဘာကြောင့် ကျရှုံးရတာလဲ ???
ဘာကွောငျ့ ကရြှုံးရတာလဲ ???
အောငျမွငျသူတိုငျး ရိုးသားစှာ ၀နျခံကွကွေးဆိုရငျ သူတို့အားလုံး ကရြှုံးမှုတှကေို ဖွတျသနျးခဲ့ရတာကို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ကရြှုံးမှုတဈခုခငျြဆီကနေ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အဖိုးတနျသငျခနျးစာနှဈခုကို ရရှိနိုငျပါတယျ။ ပထမတဈခုက ကရြှုံးရတဲ့အကွောငျးရငျးနဲ့ နောကျတဈခုကတော့ ကရြှုံးမှုကနေ ဘယျလိုပွနျရုနျးထှကျမလဲဆိုတာပါပဲ။
ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ ဘာလို့ကရြှုံးကွတာလဲ ??? ဘယျလိုပွနျရုနျးထမလဲ??? ကရြှုံးမှုကို ဖွဈစတေဲ့ ပွဿနာတှကေို သိထားပွီး ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မြားသောအားဖွငျ့ ကရြှုံးမှုဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးရငျး (၇)ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ ဇှဲသတ်တိ မရှိခွငျး
လူအမြားစု ကရြှုံးရတဲ့အကွောငျးရငျဟာ အသိပညာမရှိလို့၊ အရညျအခငျြးမရှိလို့ဆိုတာထကျ သူတို့ကိုယျတိုငျက လကျလြှော့အရှုံးပေးလိုကျလို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမဖွဈဖို့အတှကျ ဇှဲလုံ့လနဲ့ ခံနိုငျရညျဆိုတဲ့ စကားနှဈလုံးကို အမှတျရနဖေို့ လိုပါတယျ။ ဖွဈခငျြတာကို ဖွဈအောငျလုပျဖို့ ဇှဲလုံ့လရှိရမှာဖွဈပွီး မဖွဈခငျြတာ ဖွဈလာရငျလညျး ခံနိုငျရညျရှိဖို့ လိုပါတယျ။
ခဉျြးကပျမှုအသဈတှကေို ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ ဇှဲရှိဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါတော့ အောငျမွငျမှာပါဆိုပွီး တူညီတဲ့လုပျဆောငျခကျြတဈခုတညျးကိုပဲ ထပျကာတလဲလဲလုပျနမေယျဆိုရငျ ရညျမှနျးထားတဲ့အတိုငျးဖွဈလာဖို့ ခကျနပေါလိမျ့မယျ။ အဆငျမပွခေဲ့တဲ့ အားထုတျမှုတှကေို ပွနျသုံးသပျပွီး ဘာကိုပွောငျးလဲရမလဲ ဆုံးဖွတျပါ။ တယူသနျလုပျမနပေဲ ပွငျဆငျပွောငျးလဲစရာရှိတာတှကေို ပွငျဆငျပါ။ အတှအေ့ကွုံကို လမျးညှနျအဖွဈအသုံးခပြါ။
၂။ ယုံကွညျမှု မရှိခွငျး
ယုံကွညျမှုမရှိတဲ့သူတှကေ သာမနျလမျးကိုပဲ ရှေးခယျြကွပါတယျ။ တဈခုခုကို ရှေးခယျြလုပျဆောငျဖို့ ယုံကွညျမှုနဲ့ သတ်တိမရှိတဲ့အတှကျ အခွားသူတှလေုပျသမြှလိုကျလုပျရငျး နောကျကကြနြခေဲ့တတျပါတယျ။ သူတို့လုပျတာမှားနတေယျဆိုတာ သိနရေငျတောငျမှ အမြားလကျခံနိုငျဖို့အတှကျ ဘာမဆိုလုပျတတျကွသူတှဖွေဈပါတယျ။
သငျ့အတှကျ ဘာအရေးကွီးလဲဆိုတာကို ဆုံးဖွတျပါ။ တဈခုခုကို လုပျသငျ့တယျ၊ လုပျဖို့ထိုကျတနျတယျလို့ ထငျရငျ လုပျဖို့အတှကျ နှောငျ့နှေးမနပေါနဲ့။
အောငျနိုငျသူတှကေ လလေ့ာဆနျးစဈကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျတော့ အလှနျအကြှံဆငျခွငျသုံးသပျတာမြိုး မလုပျကွပါဘူး။ အရှုံးသမားတှပေဲ အဆုံးမသတျနိုငျအောငျ ဆငျခွငျသုံးသပျပွီး သူတို့မအောငျမွငျရတဲ့ အကွောငျးကို ဆငျခွတှေအေပွညျ့ပေးတတျကွတာ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ အမွငျသဘောထားကို ပွောငျးလဲပါ။ မအောငျမွငျတဲ့ ကွိုးစားမှုတိုငျးကို ကရြှုံးမှုလို့ မသတျမှတျပါနဲ့။ ပထမဆုံးအကွိမျမှာ တဈခါတညျးအောငျမွငျသှားတဲ့သူက အရမျးနညျးပါတယျ။ ထပျတလဲလဲ ကွိုးစားအားထုတျမှုတှနေဲ့သာ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို ရောကျရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈသှားတာလဲ၊ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကို သိနိုငျအောငျ အကောငျးဆုံးလလေ့ာပါ။
၄။ အတိတျကအမှားမြားမှ သငျခနျးစာမယူခွငျး
တဈခြို့လူတှကေ ရှငျသနျရငျးနဲ့ လလေ့ာကွပါတယျ။ တဈခြို့ကတော့ ရှငျသနျရုံပဲ ရှငျသနျကွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့သာ မှနျမှနျကနျကနျတှေးချေါတတျမယျဆိုရငျ ကရြှုံးမှုဆိုတာ ဆရာတဈပါးပါပဲ။ အသိဉာဏျရှိသူတှကေ သူတို့ရဲ့ အမှားကနေ ပညာယူကွပါတယျ။
ပွဿနာကို သခြောသုံးသပျပါ။ အခွအေနကေို ဆနျးစဈပါ။ ဘာကို အောငျမွငျခငျြတာလဲ၊ သငျ့ရဲ့နညျးလမျးက ဘာလဲ၊ ဘာဖွဈလို့ အလုပျမဖွဈတာလဲ စသဖွငျ့ ဆနျးစဈပါ။ သငျ့အနနေဲ့ ပွဿနာကို သခြောဆနျးစဈကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။ ဘာကိုလုပျခငျြနတောလဲဆိုတာကို သခြောစဉျးစားပါ။
စညျးကမျးမရှိရငျ အောငျမွငျမှုဆိုတာလညျး ရှိမလာနိုငျပါဘူး။ စညျးကမျးက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထိနျးသိမျးနိုငျဖို့၊ သညျးခံနိုငျဖို့၊ အနှောကျအယှကျတှေ၊ အတားအဆီးတှကေို ရှောငျရှားနိုငျဖို့ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အာရုံစိုကျနိုငျစဖေို့အတှကျလညျး ကူညီပေးပါတယျ။
အပွဈပွောစရာမရှိအောငျ ပွီးပွညျ့စုံသူဖွဈဖို့ လုပျမနပေါနဲ့။ အောငျမွငျတဲ့အခါ ဘယျလိုဘယျပုံရှိမလဲဆိုတာကို စိတျကူးထားတဲ့ အမွငျရှိဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီလိုအမွငျရှိနရေုံနဲ့တော့ စိတျအားတကျကွှတာမှနျပမေယျ့ လကျတှဖွေ့ဈလာဦးမှာ မဟုတျပါဘူး။ ရညျမှနျးခကျြတဈခုကို အောငျမွငျရုံနဲပ ပွဿနာတှအေားလုံး ပွလေညျသှားတာမဟုတျပါဘူး။
၆။ မိမိကိုယျကို တနျဖိုးမထားခွငျး
မိမိကိုယျကို တနျဖိုးမထားတာက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မလေးစားတာ၊ ထိုကျတနျမှုရှိအောငျ မနထေိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုနညျးပွီး၊ တနျဖိုးမထားတတျသူတှဟော သူတို့ကိုယျသူတို့ ရှာဖှဖေို့နဲ့ သူတို့ဖွဈခငျြတဲ့သူအဖွဈ ဖနျတီးဖို့လုပျရငျး အခြိနျကုနျနတေတျပါတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ တံဆိပျမကပျပါနဲ့။ သငျ့ ကရြှုံးခဲ့တယျဆိုတိုငျးလညျး နောကျတဈခါကွိုးစားခှငျ့မရှိတော့တာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့ကိုယျသငျ ရညျမှနျးခကျြတဈခုဆီကို ရောကျရှိဖို့ ကွိုးစားရုနျးကနျနတေယျလို့ မှတျယူပါ။ စိတျရှညျသညျးခံပွီး လုံ့လဝီရိယအပွညျ့နဲ့ ခရီးရှညျကို လြှောကျလှမျးနိုငျဖို့ လိုါပတယျ။
၇။ အကွောငျးကံကိုခညျြး ပုံခတြတျခွငျး
ကံကွမ်မာကိုပဲ ပဓာနထားတဲ့ စိတျသဘောထားရှိသူတှဟော ဘဝမှာလုပျဆောငျရမယျ့ တာဝနျတှကေို ကံကိုအကွောငျးပွပွီး ငွငျးပယျတတျသူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့အတှကျ အောငျမွငျမှု၊ ကရြှုံးမှု အားလုံးက ကံပျေါမှာပဲ မူတညျနတောဖွဈပါတယျ။
နတေို့ငျး မှနျထဲက ကိုယျ့ရုပျကိုယျကွညျ့ပွီး “ငါ့အတှကျ ငါမှာသာ တာဝနျရှိတယျ” လို့ပွောပါ။ သငျ့ဘဝမှာ အရာတိုငျးကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ မလှယျပါဘူး ဒါပမေယျ့ မိမိကိုယျသာ ကိုးကှယျရာ ဆိုတာကို သဘောပေါကျခဲ့မယျဆိုရငျ ထိနျးခြုပျနိုငျတာတှေ ပိုမြားလာတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
အောင်မြင်သူတိုင်း ရိုးသားစွာ ၀န်ခံကြကြေးဆိုရင် သူတို့အားလုံး ကျရှုံးမှုတွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျရှုံးမှုတစ်ခုချင်ဆီကနေ ကျွန်တော်တို့အတွက် အဖိုးတန်သင်ခန်းစာနှစ်ခုကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက ကျရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျရှုံးမှုကနေ ဘယ်လိုပြန်ရုန်းထွက်မလဲဆိုတာပါပဲ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ကျရှုံးကြတာလဲ ??? ဘယ်လိုပြန်ရုန်းထမလဲ??? ကျရှုံးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ ပြဿနာတွေကို သိထားပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် များသောအားဖြင့် ကျရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဇွဲသတ္တိ မရှိခြင်း
လူအများစု ကျရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်ဟာ အသိပညာမရှိလို့၊ အရည်အချင်းမရှိလို့ဆိုတာထက် သူတို့ကိုယ်တိုင်က လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အတွက် ဇွဲလုံ့လနဲ့ ခံနိုင်ရည်ဆိုတဲ့ စကားနှစ်လုံးကို အမှတ်ရနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ဇွဲလုံ့လရှိရမှာဖြစ်ပြီး မဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်လာရင်လည်း ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တွေကို ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဇွဲရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ အောင်မြင်မှာပါဆိုပြီး တူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ထပ်ကာတလဲလဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင် ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ ခက်နေပါလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ အားထုတ်မှုတွေကို ပြန်သုံးသပ်ပြီး ဘာကိုပြောင်းလဲရမလဲ ဆုံးဖြတ်ပါ။ တယူသန်လုပ်မနေပဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲစရာရှိတာတွေကို ပြင်ဆင်ပါ။ အတွေ့အကြုံကို လမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးချပါ။
၂။ ယုံကြည်မှု မရှိခြင်း
ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေက သာမန်လမ်းကိုပဲ ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ဖို့ ယုံကြည်မှုနဲ့ သတ္တိမရှိတဲ့အတွက် အခြားသူတွေလုပ်သမျှလိုက်လုပ်ရင်း နောက်ကျကျနေခဲ့တတ်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်တာမှားနေတယ်ဆိုတာ သိနေရင်တောင်မှ အများလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက် ဘာမဆိုလုပ်တတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အတွက် ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ တစ်ခုခုကို လုပ်သင့်တယ်၊ လုပ်ဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ ထင်ရင် လုပ်ဖို့အတွက် နှောင့်နှေးမနေပါနဲ့။
အောင်နိုင်သူတွေက လေ့လာဆန်းစစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့ အလွန်အကျွံဆင်ခြင်သုံးသပ်တာမျိုး မလုပ်ကြပါဘူး။ အရှုံးသမားတွေပဲ အဆုံးမသတ်နိုင်အောင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး သူတို့မအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းကို ဆင်ခြေတွေအပြည့်ပေးတတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အမြင်သဘောထားကို ပြောင်းလဲပါ။ မအောင်မြင်တဲ့ ကြိုးစားမှုတိုင်းကို ကျရှုံးမှုလို့ မသတ်မှတ်ပါနဲ့။ ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ တစ်ခါတည်းအောင်မြင်သွားတဲ့သူက အရမ်းနည်းပါတယ်။ ထပ်တလဲလဲ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့သာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို သိနိုင်အောင် အကောင်းဆုံးလေ့လာပါ။
၄။ အတိတ်ကအမှားများမှ သင်ခန်းစာမယူခြင်း
တစ်ချို့လူတွေက ရှင်သန်ရင်းနဲ့ လေ့လာကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ရှင်သန်ရုံပဲ ရှင်သန်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သာ မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်တတ်မယ်ဆိုရင် ကျရှုံးမှုဆိုတာ ဆရာတစ်ပါးပါပဲ။ အသိဥာဏ်ရှိသူတွေက သူတို့ရဲ့ အမှားကနေ ပညာယူကြပါတယ်။
ပြဿနာကို သေချာသုံးသပ်ပါ။ အခြေအနေကို ဆန်းစစ်ပါ။ ဘာကို အောင်မြင်ချင်တာလဲ၊ သင့်ရဲ့နည်းလမ်းက ဘာလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ အလုပ်မဖြစ်တာလဲ စသဖြင့် ဆန်းစစ်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ ပြဿနာကို သေချာဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာကိုလုပ်ချင်နေတာလဲဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားပါ။
စည်းကမ်းမရှိရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်း ရှိမလာနိုင်ပါဘူး။ စည်းကမ်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့၊ သည်းခံနိုင်ဖို့၊ အနှောက်အယှက်တွေ၊ အတားအဆီးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အာရုံစိုက်နိုင်စေဖို့အတွက်လည်း ကူညီပေးပါတယ်။
အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် ပြီးပြည့်စုံသူဖြစ်ဖို့ လုပ်မနေပါနဲ့။ အောင်မြင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုဘယ်ပုံရှိမလဲဆိုတာကို စိတ်ကူးထားတဲ့ အမြင်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုအမြင်ရှိနေရုံနဲ့တော့ စိတ်အားတက်ကြွတာမှန်ပေမယ့် လက်တွေ့ဖြစ်လာဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို အောင်မြင်ရုံနဲပ ပြဿနာတွေအားလုံး ပြေလည်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။
၆။ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားခြင်း
မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလေးစားတာ၊ ထိုက်တန်မှုရှိအောင် မနေထိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းပြီး၊ တန်ဖိုးမထားတတ်သူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရှာဖွေဖို့နဲ့ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့သူအဖြစ် ဖန်တီးဖို့လုပ်ရင်း အချိန်ကုန်နေတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တံဆိပ်မကပ်ပါနဲ့။ သင့် ကျရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတိုင်းလည်း နောက်တစ်ခါကြိုးစားခွင့်မရှိတော့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်သင် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဆီကို ရောက်ရှိဖို့ ကြိုးစားရုန်းကန်နေတယ်လို့ မှတ်ယူပါ။ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး လုံ့လ၀ီရိယအပြည့်နဲ့ ခရီးရှည်ကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ လိုါပတယ်။
၇။ အကြောင်းကံကိုချည်း ပုံချတတ်ခြင်း
ကံကြမ္မာကိုပဲ ပဓာနထားတဲ့ စိတ်သဘောထားရှိသူတွေဟာ ဘ၀မှာလုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်တွေကို ကံကိုအကြောင်းပြပြီး ငြင်းပယ်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် အောင်မြင်မှု၊ ကျရှုံးမှု အားလုံးက ကံပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့တိုင်း မှန်ထဲက ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကြည့်ပြီး “ငါ့အတွက် ငါမှာသာ တာဝန်ရှိတယ်” လို့ပြောပါ။ သင့်ဘ၀မှာ အရာတိုင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုတာကို သဘောပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေ ပိုများလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Previous: မနက်စောစော အိပ်ရာထချင်ရင် ဒါလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါ
Next: စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည်တွေကို ရှောင်ကြင်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း (၄)ခု